ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကိုသာ မဲပေးလိုက်ပါ။ (Credit to Aung Gyee) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကိုသာ မဲပေးလိုက်ပါ။ (Credit to Aung Gyee)
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကိုသာ မဲပေးလိုက်ပါ။ (Credit to Aung Gyee)
သင် ကြက်ဆူပင် စိုက်လိုပါသလား?
သင် အဓိကရုဏ်းများနှင့် ကျီးလန့်စာစား ရှင်သန်လိုပါသလား?
နေမျိုးဝေ ဦးဆောင်သော ပါတီကို မဲပေးလိုက်ပါ။
ဦးဝီရသူ တရားပွဲများကို လွတ်လပ်စွာကျင်းပခွင့်ပေးထားသော ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအား မဲပေးလိုက်ပါ။
သင် မည်သူ့ကို အဖေခေါ်ရမှန်းမသိပဲ ဖြစ်ချင်ပါသလား?
ပီအာဖော်ဆောင်သော ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည် တို့ အဖွဲ့ရှိနေသည့် ခမောက်သူခိုးပါတီအား မဲပေးလိုက်ပါ။
ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည် တို့ နှင့် ထူးမခြားနားသည့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအား မဲပေးလိုက်ပါ။
ခြင်းတောင်းကိုကျောမှာပိုး ဆင်ကြယ်ဖိနပ်စီးပြီး သေနတ်အစုတ်ကိုင်ကာ လစာ တစ်သိန်းဝန်းကျင်ဖြင့် အသေခံစစ်တိုက်လိုပါသလား?
တပ်မတော်သားများအား စစ်ရေးစွမ်းရည်ပြည့်ဝအောင် လွှတ်တော်အတွင်း ၂၅% ထည့်ကာ လေ့ကျင့်ပေးနေသည့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအား မဲပေးလိုက်ပါ။
သင် ကျပ်နှစ်ထောင်ဖြင့် နေ့စဉ်ဘဝ လုံလောက်ပြီဟု ခံစားရပါသလား?
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အား မဲပေးလိုက်ပါ။
သင့်ထံမရောက်ပဲ သင့်ကိုယ်စား ပိုက်ဆံပတ်ချေးယူတတ်သူကို အလိုရှိပါသလား?
သင်နှင့်တကွ ပြည်သူအားလုံးအတွက် စောက်သုံးမကျတဲ့ စစ်တပ်ကို ပိုင်ဆိုင်လိုပါသလား?
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကိုသာ ရဲရဲကြီး မဲပေးလိုက်ပါ။
ကမာ္ဘပေါ်မှာ အညံ့အဖျင်းဆုံး ခေတ်နှောင်းသင်ရိုးများကို အလွတ်ကျက်မှတ်ပညာရေးစနစ်ကြီးဖြင့် အနာဂါတ်မျိုးဆက်အား ဝံ့ဝံ့ထည်ထည် ပညာသင်ကြားစေလိုပါသလား?
လူမှုရေးအသင်းကြီးကနေ ချက်ခြင်း ပါတီအဖြစ် ပြောင်းသွားခဲ့တဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကြီးကို မဲသာပေးလိုက်ပါ။
မိဘပြည်သူများ ခင်ဗျား … အစချီကာ ပြောချင်ရာပြော။ ပြီးရင် လုပ်ချင်ရာလုပ်တဲ့ တစ်လတစ်ခါ လာတဲ့ အသံကို မေ့မရအောင် သင်စွဲလမ်းနေပါသလား?
မြစ်ဆုုံ၊ လက်ပတောင်းတောင်၊ သစ်တောများ နှင့် အခြားသယံဇာတများ ကဲ့သို့ သင်နှင့်တကွ နိုင်ငံသားအားလုံးပိုင်သော အရာများအား လူမသိ သူမသိ ရောင်းစားသည့် အမှုများကြားဝယ် အရည်မရ အဖတ်မရ တကောက်ကောက် လိုက်လံစုံစမ်းရသော စုံထောက်ခြင်းအမှုကို နှစ်သက်ပါသလား?
အနာဂါတ်မှာ အရက်ဆိုင်ဘီယာဆိုင် လုပ်ငန်း အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်လိုပါသလား?
နယ်လှည့်ပါးရိုက်ခြင်း၊ ပုဆိုးလှန်ပြခြင်းအမှုများကို သင် ဖီးလ်လာပါသလား?
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကြီးကို သာ မဲပေးလိုက်ပါ။
သင်ဟာ မြန်မာပြည် မှာ ရှိသမျှ တိုင်းရင်းသားအားလုံးနဲ့ အမြဲတမ်းသွေးကွဲပြီး အချင်းချင်း တဂျိန်းဂျိန်းချနေချင်ပါသလား?
ခေါင်းလောင်းအကြောင်းပြပြီး တပြည်လုံးအလိမ်ခံရတဲ့ အရသာကို သင်နှစ်သက်ပါသလား?
ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုကို လုံးဝ မေ့ပစ်လိုက်ချင်ပါသလား?
ရွှေမြန်မာ လို့ အားရပါးရကြွေးကြော်ပြီး ပြည်ပကို အိမ်ဖော်တွေတင်ပို့ရတဲ့အလုပ်ကို ပီတိဖြစ်နေပါသလား?
ပြည်ပမှာ သင်အခက်အခဲကြုံတဲ့အချိန် သံရုံးနဲ့ သင် လားလားမှမဆိုင်သကဲ့သို့ တစိမ်းဆန်ဆန်နေချင်ပါသလား?
သင်နှင့်တကွ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ဒုက္ခရောက်ချိန်မှာ ပြည်ပနိုင်ငံတကာက ဝင်လာမယ့် ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို တားဆီးပိတ်ပင်စေချင်ပါသလား?
ကျောင်းသားတွေလို အရိုက်ခံပြီး ထောင်ချခံရချင်ပါသလား?
တိရစာ္ဆန်ပုံစံ ရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ ငွေကြေးများကို တန်ဖိုးထားသုံးစွဲလိုပါသလား?
အို …. ဘယ်လို အဆိုးမျိုးပဲ ကြုံချင် ကြုံချင် …
သင့်အတွက် ပြည်ခိုင်ဖြိုး က အသင့်ရှိနေပါတယ်။
“ဘာပဲလိုလို … ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှာရှိတယ်”
ကိုကြီးမိုင်း က မလာတော့လဲ သူ ရေးတာကိုပဲ သယ်လာပေးတော့မယ်.။
လူတွေ မိုက်ဖို့ ကြံတုန်းပဲ။
ဒီရက်တွေအတွင်း ဘာမှမရေးဖြစ်တာက အလုပ်များနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဖေ့ဘွတ်မှာ မွေ့လျော်လေ့မရှိပဲ နိုင်ငံအနာဂါတ်အတွက်စိတ်၏ ကြီးစွာသော မချမ်းမြေ့ခြင်းကြောင့်သာ ကိုယ်သိသလောက်ကလေးကို လုံလထား၍ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
လူသုံးအင်မတန်များလာသော ဖေ့ဘုတ်ကို ကြံ့ဖွံ့လော်ဘီများက ဝါဒဖြန့်ရာတွင် လက်နက်သဖွယ်အသုံးချလာသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့် မိမိသည်လည်း မနေသာ၍ ကိုယ်တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ ပြန်လည်ရေးသားခဲ့သည်မှာ အခုချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။
မိမိကဲ့သို့ မနေနိုင်သဖြင့် တတ်နိုင်သမျှ ရေးသားပေးနေသော ဖေ့ဘုတ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်သူ စတီဗင်ချမ်း ကလည်း “၂၀၁၅ မှာမှ ဒီအစိုးရဆက်ရှိနေရင် ဖေ့ဘုတ်မှာ နိုင်ငံရေးအကြောင်းမရေးတော့ဘူး၊ ဝီရသူတို့၊ စစ်အာဏာရှင်တို့နဲ့ပဲတန်တဲ့သူတွေ” ဆိုတဲ့သဘောမျိုး မြည်တွန်တောက်တီးထားတာကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
ကျွန်တော့်သဘောကိုပြောရရင်လည်း ကိုစတီဗင်ချမ်း ခံစားချက်အတိုင်းပါပဲ။
ဒီ ၂၀၁၅ မှာမှ နိုင်ငံရေးလောကမှာ ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို အင်အားသေးအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ရင် မြန်မာပြည် အဖတ်ဆည်လို့ မရတော့ပါဘူး။
ဒီလက်ရှိအစိုးရကို ကိုယ်မှာစိုက်နေတဲ့ဆူး လိုသဘောထားပြီး ကလော် ထုတ်ရအောင်။
မျှော့တစ်ကောင်ရဲ့စည်းစိမ်ဆိုတာ သူတစ်ပါးရဲ့သွေးကို စုပ်မှရတဲ့ ချမ်းသာပါ။
အခုလည်း သယံဇာတတွေနဲ့ဖောင်းအိနေတဲ့ အမိမြန်မာပြည်ကြီးကို လူမျှော့တွေ ဝိုင်းစုပ်ကြလို့ ပိတ်ရှုံ့တွန့်ခွက်နေပါပြီ။
အဲဒီမျှော့တွေကို ခွာချပြီးရင်တောင်မှ အဲဒီဒါဏ်ရာတွေကို ပျောက်အောင် မနည်းလုပ်ရဦးမယ်။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီဟာ ဖုန်စုပ်စက်ထဲက အမှိုက်အိပ်လိုပါပဲ။
ဆံထွေးတွေ၊ ငါးရိုးတွေ၊ ဇီးစေ့တွေ၊ ပိုးဟပ်တွေ အစရှိတဲ့အမှိုက်တွေဟာ အဲဒီအိတ်ထဲလာစုသလို လူညစ်တွေ၊ လူမိုက်တွေ၊ အတ္တသမားတွေ၊ တိုင်းပြည်အတွက် အသုံးမဝင်တဲ့တစ်ကိုယ်ကောင်းသမားတွေ ဟာ ကြံ့ဖွံ့ပါတီထဲမှာ များများကြီးလာစုနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီပါတီကို နာလန်မထူနိုင်အောင ်လူထုအားနဲ့ ဒါဏ်ခတ်ခြင်းဟာ အဲဒီအမှိုက်အိတ်ကြီးကို စွန့်ပစ်လိုက်တာပါပဲ။
၁) ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို မဲပေးမယ့်သင်ဟာ ကိုယ်ထိုင်နေတဲ့သစ်ကိုင်းကို ပုဆိန်နဲ့ခုတ်ချတဲ့ သူမိုက်သော်လည်းကောင်း၊
၂) ကိုယ့်ကိုခုတ်မယ့်ဓါးကို ထက်နေအောင် သွေးပေးချင်တဲ့ အန္ဓသော်လည်းကောင်း၊
တကယ်လို့များ သင့်အနေနဲ့ တခြားပါတီတွေကို မယုံဘူးဆိုရင်တောင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို မဲပေးခြင်းတည်းဟူသော နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှုကို မလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဘဝတသက်တာလုံး လိပ်ပြာသန့်သန့်နေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ငါသည် စစ်ကျွန်ဘဝမှ ဘယ်တော့မှလွတ်မည်မဟုတ်။
ငါ၏သမာအာဇီဝကျစွာရှာဖွေထားသော အကြင်ဥစ္စာပစ္စည်းတို့သည် ကြံ့ဖွံ့ပါတီကြောင့် ဖရိုဖရဲပျောက်ပျက်ဆုံးရှုံးခြင်းသည် အချိန်မရွေးကျရောက်လာနိုင်လတ္တံ။
အကြင်ပါတီကြောင့်ပင် မိုးရေစွတ်သောစပါးနှံတို့၏ ကျဆုံးခြင်းကဲ့သို့ ငါ၏ ဦးခေါင်းသည် သေနတ်ပြောင်းဝအောက်တွင် အစဉ်အမြဲ ငိုက်စိုက်တွဲလောင်းကျဆင်းနေရလတ္တံ။
ခရီးကန်သင်းလှည့်လည်ကျက်စားရာတွင် တစ်ပြည်တရွာရောက်သည့်အခိုက် အများသူငါ၏ ကဲ့ရဲ့တင်းဆို စော်ကားမောက်မာမှုများအောက်တွင် ခြေသုတ်ပုဆိုးမြွေစွယ်ကျိုးသကဲ့သို့ သိမ်ငယ်ရှက်ရွံ့စွာဖြင့် ချောက်ခြားရပ်တည်နေရလတ္တံ။
တရားတဘောင်အစီအရင်၏ နှိက်စက်မှုကြောင့်ငါ၏သစ္စာတရားတို့သည် အဓမ္မဝါဒီတို့၏ ပြက်ရယ်ပြုခြင်းကြောင့် တင်းကုပ်အချုပ်တွင် နေ့မြင်ညပျောက် အချည်းနှီး ကုန်ဆုံးရလတ္တံ။
ဤကားကုသိုလ်၊ ထိုကား အကုသိုလ်တည်းဟူသော ဗုဒ္ဓ ဓမ္မစက်၊ ချားရဟတ်သည် အလဇ္ဖီရဟန်းကြောင့် ပြောင်းပြန်လည်သဖြင့် ငါတို့၏ နှလုံးသားများသည် ရှားမီးတွင်ဖုတ်သော သံတွေခဲကဲ့သို့ အေးချမ်းခြင်းသည် ချုပ်ငြိမ်းကွယ်ပျောက်တော့လတ္တံ။
ထမင်းတလုပ်၊ ရေတမှုတ်အတွက် နေပူစပ်ခါးရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရသဖြင့် ငါတို့၏ဘဝသည် တော်မြောင်ချောက်ခြားကျင်လည်လှုပ်ရှားနေရသည့် ဝေမာနိကပြိတ္တာအဖြစ် ဘဝမကူးခင် အရှင်လတ်လတ်ပြောင်းလဲရတော့လတ္တံ။
ဘုရားကားအောက်၊ မျောက်ကားအထက်ဆိုသလို ရာဇပလ္လင်ပေါ် မသူတော်ထိုင်သဖြင့် စန္ဒာလမင်းကို ရာဟုဖမ်းစားသလို ထက်အောက်ဝန်းကျင်၌ အမိုက်သာလျှင် မင်းမူသကဲ့သို့ ရဟန်း၊ ရှင်လူစိတ်ဝမ်းမချမ်းမြေ့ခြင်းသည်သာလျှင် အလွန်ထင်ရှားရှိကုန်တော့လတ္တံ။
မြန်မာနိုင်ငံကို ကယ်တင်ရန် မိမိကိုယ်ကိုလေးစားသူမှန်သမျှ ကြံ့ဖွံ့ပါတီကိုရှောင်ကြပါစို့။
(Credit to မဟာမိုင်း)
.ပြည်ထိုင် မခိုးဘူးလို့ ယုံကြည်ရမလား….
ပြောရဦးမယ် နာဂစ်အပြီး မဲပေးတုန်းကတောင် တစ်အိမ်လုံးစာအတွက် အမှားခြစ်ပေးခဲ့တာ ကြံ့ဖွတ်ကို။
အိုးအို… သမ္မတကြီးဘက်တော်သားတွေ ရှိသရွေ့.. သမ္မတကြီးပါတီကို မဲပေးလိမ့်မယ်.. ဥသေးစိမ် ကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ဆွဲထုတ်ရေး.. ဒို့အရေး..
ဒီချုပ်က… သမ္မတလောင်းအဖြစ်.. ဘယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းကို.. ရွေးတင်ပေးမှာလည်းအပေါ်မှာ.. ကြည့်ကြပြီး.. တပ်မတော်သားမဲတွေပုံ.. ရလာမယ်ထင်မိတယ်…။
တိုးတိုး​လေး ဆိုတာ ဒီရွာထဲက ဆနွင်​းမကင်​း ​လေးကို​ပြောတာမဟုတ်​
. လောလောဆယ် သတင်းထွက်နေတာကတော့ ” ဦးသောင်းငွေ” ဆိုလား “ဦးသောင်းမြ” ဆိုလား။
. မင်းလောင်းမြှောက်ဖို့ ဆုငွေထုတ် ပြီး ရှာနေပြီ တဲ့။
. တောက်စ် (မူ -ဂဂ)
. ဦးသောင်းစိန် ဆိုလို့ ကတော့ ကျုပ်တို့ရွာ ပွ ပေါက်ဘဲ။
. ဦးသောင်းစိန် ဆိုလို့ ကတော့ ရွာသူား လူတော်တွေအားလုံး အစိုးရဝန်ဂျီးတွေခန့်ပစ်မှာပေါ့
၂၀၀၈ နာဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြောင့် ပြည်သူအများ မြေယာအတင်းအဓမ္မအသိမ်းခံခဲ့ရသလို
မြေယာပြန်ရလိုလို့ ဆန္ဒပြရာက မြေယာပြန်မရဘဲ ပုဒ်မ(၁၈)နဲ့ ထောင်နန်းစံခဲ့ရသူ့ပြည်သူတွေမနည်းလှပါ။
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူ အဘိုးအဘွားများပင်ပါပါသည်။ မိရိုးဖလာလက်ငုပ်လက်ရင်း လယ်သမားကြီးများ၊ ဆင်း
ရဲသူမြေယာလုပ်သားများ ဘဝပျက်သည့်ထက် အချုပ်နန်း၊ ထောင်နန်းမြန်းခဲ့ကြရသည်။ ကယ်တင်သူမဲ့သလို ရှေ့
ကမားမားမတ်မတ်ရပ်ခဲ့သူများပင်လျှင် ပုဒ်မအမျိုးမျိုးဖြင့် အမှုရင်ဆိုင်နေရဆဲ။ အချို့ပြည်သူများ အသက်ဝိညာဉ်ကင်း
မဲ့စွာမြေယာကိုစွန့်ခွာပေးလိုက်ရသည်။ ဘုန်ကြီးရဟန်းသံဃာများမီးလောင်ဗုံးနှင့် အာရုံဆွမ်းကပ်ခံလိုက်ရသည်။ ထူး
ကဲသော အာရုံဆွမ်းတစ်နပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘာသာသာသနာညှိုးနွမ်းစေလို့ဆိုပြီး ယနေ့ထိ အရေးယူမခံရခဲ့ပါ။ လွန်စွာ
ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာကောင်းလှပေစွ။ ထိုအရာများသည် ကျွန်ုပ်တို့ ပြည်သူများ မှားယွင်းခဲ့မှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၂၀၀၈ နာ
ဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြိုင်ဘက်မရှိ ထောက်ခံခဲ့မိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ကြိမ်မသိ၍မှားခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပြည်သူအများ မှားယွင်းစွာ အတွေးခေါင်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရတာအမြင်မျိုးကြောင့်
ပြည်သူ့လယ်ယာ၊ ပြည်သူ့မြေများ အပ်ချလောင်းဆိုပြီး ကျူးကျော်မြေ၊ တပ်ပိုင်မြေဖြစ်ခဲ့ကြရသည်။ မည်သို့ဆိုစေ ကျွန်ုပ်
တို့ပြည်သူများ မဲတစ်ပြားကြောင့် ပြည်သူအများ ဒုက္ခပင်လယ် ဝေခဲ့ရသလို မွဲသထက်ပိုမွဲခဲ့သည်က ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို
မသိလိုက်မသိဖာသာ မဲပေးခဲ့မိသည်မှာ ဝန်ခံရပါတော့မည်။ မဲတစ်ပြားကြောင့် ပြည်သူ့အိုးအိမ်၊ မြေယာ၊ အသက်၊ မလို
လားအပ်ဘဲ ဆုံးရှုံးစေခဲ့ရသည်က ကျွန်ုပ်တို့၏ မဲတစ်ပြားကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် … ပြည်သူများမှာ ယနေ့အချိန်
အထိ အပြစ်မရှိပါ။ နိုင်ငံရေးစိတ်ဓါတ်၊ အကြားအမြင်၊ ဗဟုသုတ စစ်အစိုးရက ပိတ်လှောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယနေ့
ကာလ နိုင်ငံရေးပွင့်လင်းလာချိန် တစ်ဘက်က ဘာသာရေးမှိုင်းကြီးနဲ့ လုပ်ကြံဇာတ်ကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်
တာအပြည့်နဲ့ သရုပ်ဆောင်ကပြ ဖျော်ဖြေနေဆဲ။ မိမိထင်သည်က ပြည်တွင်းစစ်ထက် ဘာသာရေးကွဲလွဲမှုမှိုင်းတိုက်တဲ့ ဘာ
သာရေးလူမျိုးရေး အခြေခံတဲ့ ပြသနာဟာ အာဏာရှိသူတို့ ဆက်လက်နေရာရစေတဲ့ အသက်ရှုပေါက်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။
တိုင်းပြည်မှာ ပြသနာများလေ စစ်အာဏာရှင်တွေ အာဏာကိုဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်လေဆိုတာ ငြင်းမရတဲ့ သီအိုရီဖြစ်လာနိုင်ပါ
တယ်။ ပြသနာမရှိရင် ရှာမှာပေါ့။ ဘာသာရေးကို မီးအဖြစ် ဆွဲယူရှို့တာဟာလည်း နောင်ရာစုနှစ်တွေအတွက်ပါ ကြိုတင်ပြီး
ဆက်လက်အာဏာယူဖို့ plan တွေများ ဖြစ်နေမလား တွေးစရာပါ။ ဘာလို့ဒီ plan ကိုဆွဲယူနိုင်သလဲဆိုတာ ပြည်သူတွေအား
လုံးဟာ ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ကြားက ပညာတတ်မြောက်မှု၊ တွေးခေါ်စဉ်းစားနိုင်မှု နည်းလာတဲ့အပေါ်ကို အခြေပြုထားတယ်ဆိုတာ
လက်ရှိကာလမှာလည်း ဘာသာရေးနွယ်တဲ့ ဝါဒဖြန့်မှုတွေကနေ ပြည်သူအများတွေဝေသွားအောင် ထောက်ခံမှုကျစေအောင်
NLD ဆိုရင် ကုလားပါတီဖြစ်ကြောင်း၊ ကုလားထောက်ပံ့ငွေစားကြောင်း မခိုင်လုံသော ဝါဒဖြန့်မှုနဲ့ ပြည်သူအများကို တွေဝေအောင်
လုပ်နေဆဲပါ။ တစ်ဘက်ကလည်း ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေမှာ မဲခိုးခဲ့တာ သေသူစာရင်းတွေပါ မဲစရင်းပါခဲ့တာကို ပြည်သူတွေ သိခဲ့တဲ့
အတွက် အခုနေမှာ မဲဝယ်တဲ့စနစ်မျိုးကို အသစ်တစ်ဖန် ကျင့်သုံးလာခဲ့ပါတယ်။ တစ်သက်လုံးမှာဒီလမ်းလေး ပြင်ပေးရင်ပြည်သူ
တွေ အဆင်ပြေချောမွေ့သွားမှာ သိရဲ့နဲ့ အစိုးရသက်တမ်းတစ်လျှောက် မပြင်ပေးဘဲ လျစ်လျူရှု့ခဲ့ပြီး မဲလိုချင်တဲ့ အခါမှ ရပ်ကွက်
ထဲမှာ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝင်ရင် လမ်းပြင်ပေးမယ်။ (ကျောက်ခဲလာချ) (ဓါတ်တိုင်လာစိုက်) အသင်းဝင်အင်အား ဘယ်လောက်ပမာဏရမှ ပြင်ပေးမယ်။
လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး မက်လုံးပေး ထောက်ခံမဲယူ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းလာတာတွေလည်း ဖြစ်လာတာကြားရသလို၊ တစ်သက်လုံးအမှောင်
ထဲမှာထားခဲ့ပြီးမှ ဆိုလာပြား၊ ဘက္ထရီနဲ့ အသင်းဝင်ရင်၊ လက်မှတ်ထိုးရင်ဆိုပြီး မဲစရင်းရယူနေတာတွေကလည်းတစ်ဖုံ၊ လယ်ပြန်ပေး
မယ် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်မှ ဆိုတဲ့မက်လုံးမျိုးတွေနဲ့ မဲဆွယ်နေသံတွေလည်း ဝေးလံတဲ့ ကျေးလက်တောရွာလေးတွေမှာကြားနေရပါတယ်။
အဆိုးဆုံးက ဘာမှမသိ စိုင်းတောင်မထိုးတတ်တဲ့ တောသူတောင်သားတွေကို ဘာမှန်းမသိတဲ့စာရွက်ပေါ် လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတဲ့ ကိစ္စတွေ
ဟာ ထောက်ခံမဲဖြစ်ပါသလား။ ကြိုတင်မဲအဖြစ် အကြုံးဝင်ပါသလားလို့ ပြန်လှန်မေးခွန်းထုတ်ကြည့်ချင်ပါတယ်။
၂၀၀၈မှာ မဲမပေးသူပေါင်း အများကြီးက ရာခိုင်နှုန်း ၉ဝ ကျော်တယ်ဆိုပြီး ကြိုတင်မဲကြောင့် ပြည်သူအများ ဘာမှန်းမသိတဲ့ ဘာမဲ
တွေကြောင့် ဘာမှန်းမသိဘဲ ဘာအစိုးရတက်လာပြီး ဘာတွေလုပ်မှန်းမသိရင်ဆိုင်လိုက်ရပါတယ်။ သေတဲ့သူတွေ စာရင်းပါ ပါနေခဲ့
ပါတယ်။ ခံရတာကတော့ ပြည်သူချည်းပါ။ သေချာတာကတော့ ဘာမှန်းမသိဘဲ ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဘောင်းဘီချွတ် ချိပ်
ထမီဝတ်တွေထဲမှာ NLD အမတ်တွေမပါပါဘူး။
ဒီကြားထဲမှာမှလည်း တစ်သက်လုံး လူမျိုးနဲ့ ဘာသာ မီးလောင်ဗုံးအထုခံရချိန်က ဘာတစ်ခွန်းမှ လေသံကျယ်ကျယ် မဟခဲ့သူတွေက
အမျိုးဘာသာကို ရွေကောက်ပွဲနီးမှ စောင့်ရှောက်မလိုလိုပါတီတွေ ထောင်မယ်ဆိုတော့ စဉ်းတော့ … စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်။ ခါတော်
မှီပန်း မနမ်းစေလိုပါ။ ကိုယ့်ဦးနှောက် အသိဉာဏ်နဲ့သာ စဉ်းစားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ စစ်ကြောရေးမှာ ပြည်သူ့ဘက်တော်သား တက်ကြွသူ
နိုင်ငံရေးသမားလို့ယူဆသူ မှန်သမျှ အသက်ဖျောက်ပေးခဲ့သူတွေက လူမျိုးနဲ့ ဘာသာမြင့်အောင် လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ စဉ်းတော့ စဉ်းစား
စရာပဲ။ ၁၉၈၈မှာ ပြည်သူတွေကျောင်းသားတွေ ဒီမိုကရေစီရဖို့ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ချိန်မှာ ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ အလံရှုးတွေကြောင့် ရဟန်းသံဃာ
ပြည်သူတွေ အသတ်ခံခဲ့ရတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။ သေသွားခဲ့တဲ့ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူ၊ ကျောင်းသားတွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆွေမျိုးတော်
စပ်သူတွေ မျက်နှာကို ငဲ့ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ပြည်သူကိုသတ်လိုက်၊ ဥပဒေမဲ့ သုတ်သင်လိုက်၊
လူမိုက်အားပေးမလုပ်ပါနဲ့။ နောက်မှာ သန်းနဲ့ချီတဲ့
” ပြည်သူကိုသတ်တော့ လက်မရွံ
ဒီလူတွေကို မဲပေးမိရင် ….
ဒီပြည်သူကိုသတ်တာ မိတ်ဆွေပါပဲ ”